Ny rindrina UHD Video, efijery nitarika UHD, UHD no nitarika ireo mpanamboatra sy mpanamboatra any Sina
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:Rindrina UHD Video, Efijery nitarika UHD, UHD nitarika fampisehoana,,,
Home > Products > UHD Led Screen > UHD Led Display-PJ
Ny vokatra avy amin'ny UHD Led Display-PJ , mpanofana manokana avy any Shina, Rindrina UHD Video , Efijery nitarika UHD mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny UHD nitarika fampisehoana R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Fampisehoana fisehoana LED P2.5
Efijery LED LED
Ny andian-dahatsoratra PJ andiany HD dia manana lanja maivana kokoa. Fialofana sy fanarenana ny aoriana. Ary miaraka amin'ny kojakoja modular, tena tsara ho an'ny Maintenance izany. Ny andiany Priva LED PJ dia manana piksel pith P1.56mm, P1.875mm, P2mm ary P2.5mm ho an'ny rindrin'ny Led Video. Ity...
Inona no ilain'ny efijery fampisehoana LED piksel kely Fampitana fahitana. Ny efijery Piva LED dia eo ambanin'ny fanandramana fakan-tsary avo lenta, ny fanamafisana ny loko sy ny halalin'ny loko. Ka ny fanamafisana dia avo kokoa. Priva LED PJ andian-dahatsoratra misy hazavana HD mitarika dia manana lanja...
Shina UHD Led Display-PJ mpamatsy
Amin'ny maha-karazan'oritra kabinetra malaza indrindra, ny vokatra vita amin'ny PJ Priva LED dia mora kokoa amin'ny fametrahana, ny fikolokoloana ary ny fitaterana. Ity andiany ity dia manarona ny Screen Screen amin'ny P1.56mm, P1.875mm, P2mm ary P2.5mm. Ny andiany PJ UHD dia nitarika ny fidiram-bolan'ny mpanohana & fidirana amin'ny lamosina. Ny endrika modely mora kokoa amin'ny fikojakojana. Manidy ho ambony sy ambany, havia sy ankavanana hanamora sy haingana ny fametrahana. PJ series series UHD nitari-dàlana napetraka miaraka amin'ireo modules sy kabinetra miaraka, Hafainganana ny fametrahana sy ny fitaterana ihany koa. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba an'io sera fampirantiana LED io, fifanarahana Pls izahay!
Rindrina UHD Video
Efijery nitarika UHD
UHD nitarika fampisehoana